Shaqaalaha wakaalada koomeershaal noominiis ayaa ka cabanaya wakalada oo yidhi waxa ay na so gaadhsiisa dulmi iyo xoogayaga oo ay uu isticmaasho si sharci daro ah – ዜና ከምንጩ
Waxa wargayska addis maleda cabashadooda u sheegtay ururka shaqaalaha rasmiga ah ee ha’ayada sida gaarka ah loo leeyahay ee koomeershaal noominiis, waxana ay sheegen in ay dulmi soo gaadhsiiso oo ay ku xad gudubto xuquuqdooda bini aadamnimo oo ay xoogoodana uu isticmaasho si sharci daro ah.
Abraham Cadnaan oo ah xoog hayaha guud ee ururka shqaalahaasi sida uu wargayska ugu waramay ayaa ysheegay in xiligan xaadirka ah ha’ayadu ay hawl galiso in kabadan 30 kun oo shaqaale, waxaana ay shaqaalaha uu soo ban dhigtaa ha’ayado dalka gudihiisa ah iyo dalka dibadiisaba ah, waxaana ay hawsha bilawday laga bilaabo sanadkii 2004tii ilaa iyo xiligaanna xaadirka ahna shaqaalaha way silcisa.
Waxaana uu yidhi waxa jira shaqqle kal duwan oo ay shaqo gayso ha’ayadu waxaana ka mid ah waashmaaniin, kuwa ka shaqeeya nadaafada, kuwa xafiisyada dhaxdooda la dirdirsado, direewaliin, kuwa lacagaha marka baangiyada laga soo saarayo waardiyeeya, elektrishaano iyo qaar kale, marka qof waashman ah loo shaqaalaysiinayo bangi addis ababa ku yaala waxa uu mushaahaarkiisu yahay bishii 7144 bir balse waxa waashmaankaasi soo gaadha 2160 bir oo kaliya. Marka lacagta 7144ka bir ay bangiga magaciisa kaga soo saaraan 4984 bir ee kale waxa si sharci daro ah u qaadata ha’ayada koomershaal nominiis.
Waxa kale oo uu sheegay in sharciga shaqaalaynta iyo shaqaalaha iyo dastuurka jdfi uu u ogolyahay shaqaalaha in ay samaystaan urur oo ay is kaashadaan xaqna ay u leeyihiin, hadana waxa ay ha’ayadu rabta in ay ururadaasi kala burburiso, cida ururka ka midka ah ee isku dayda in ay xaquuqdooda waydiistaan waxa laga erya shaqada oo mushaahaarkoodana waa laga xanibaa.
Waxa kale oo uu sheegay in ururadu ay marar badan isku dayeen in dhibaatooyinkooda ama cabashadooda ay u gudbistaan xafiisyada kala ah xafiiska shaqaalaha iyo arimaha bulshada ee magaalada addis ababa, wasaarada jdfi ee shaqaalaha iyo arimaha bulshada, bangiga ganacsiga ee itoobiya, ha’ayada koomeershaal noominiis iyo gudiga xuquuqda biniaadamka, balse in la yidhaahdo wax yar suga wax baa la idiinka qaban doona mooyi ee in aanay jirin wax loo qabtaa.
Waxa kale oo uu yidhi xoog hayuhu marka shaqaalaha la shaqaalaysiinayo waxa uu yaala sharci ah in shaqaaluhu 60 cisho oo tijaabo ah ay shaqeeyaan, kadibna joogto laga dhigo anaga se waxa naloola dhaqma in sideed ama sagaal sanadood aan ugu shaqayno si aan joogto ahayn oo sanad kastana heshiiska naloo cusboonosiyo.
Sida oo kale lacagaha shaqaalaha iyo hayayada laga jaro ee loo dhigo xiliga ay hawl gabaan noqdaan shaqaaluhu oo ah boqolkiiba 18, halka shaqaalahana laga jaro boqolkiiba todoba hayaduna in ay u dhigto ah boqolkiiba koob iyo toban ayaa waxa oo dhanba ha’aydu waxa ay ka wada jarto shaqaalaha.
Waxa kale oo ay ururadu yidhaahdeen cashuurta loo yaqaano vat ka oo alaabada uun laga qaado ayaa waxa ay ha’ayadu ka jarta vat kaasi lacagahayaga na loo siiyo kirada guryaha, traansboortiga, fasax sanadeedka, maalmaha ciida, xiliga ay dumarku umusha yihiin iyo waxyaabo la mid ah oo mushaharkayaga ayaa laga jaraa.
Sida ay ururadu sheegeen xafiisyada dawlad iyo kuwa aan dawliga ahaynba marka ay rabaan shaqaale waxa jira shaqaale badan oo ku filan, waxaana ay hayadu karaysa in ay isu keento si toos ah shaqaalaha iyo cidii doonaysay in loo shaqeeyo, balse waxa ay ha’ayadu soo kala dhax galisa dilaalin goosta shaqaalaha mushahaarkooda kalabadh oo si sharci daro ah uga faiidaysta oo nolasha dadka ku ciyaara, dawladu sababta ay arintan uga aamustay ee ay u daawanayso waan la yaabanahay baryahan danbe arintaasi waaban iska daynay.
Madaxa ha’ayada koomeershaal nominiis generaal Tilaahun Segaaye oo arintan uu ka waraystay wargayska addis maleda ayaa sheegay in cabashada ay sheegteen ururku intooda badani in waxba aanay ka jirin oo waa been. Sida uu sheegay xafiiskoodu hawsha uu qabatona waxa weeyaan si xafiisyadu ay wakhtigooda uga fa’aidaystaan oo hawlohooda muhiimka ah ay uu qabsadaan oo ay yareeyan lacagaha ka baxaya waxaanan ugu adeegna sidii shakhsi sadexaad ah oo waxaanu uu keena kolba shaqaalaha ay doonayaan, waxana ha’ayadu ay u samaysay dadka waxbarashadoodu ay hoosayso fursado shaqo.
Arinta ku saabsan mushahaarka shaqaalahana fa’aidooyinka ay helaanna marka lagu daro ugu yaraan sadex ilaa afar kun oo bir ayaanu siina, marka la barbar dhigo wakaaladaha kale waxa ay helaan mushaharka ugu fiican, waxa kale oo uu cadeeyay lacagaha ay ka qaatan ha’ayadaha waxa ay uu goostaan dharka iyo hawlaha kale ee loo qabto shaqaalaha, canshuurta vaatka ah ee laga jarona waxa loo goosta adeega maadaamaay khasab tahay.
Arinta la xidhiidha shaqaalaha joogtada ahna ha’ayda ka ma jiraan wax shaqaale ah oo joogto ah sidaas darted waxa aan uu cadaynayna in anaanu ka dhigi Karin shaqaale kasta joogto.
Sida oo kale marka shaqada aan shaqaalaysiinayno wax kasta waanu uu sheegna, madaama ay ogolaanshahooda ay shaqada ku soo galaan hadii ay ka xumaadaan waxa halkaasi ka jira waa in ay iskaga tagaan shaqada ee maaha in ay sumcada ka dilaan ha’ayada.waxa intaasi dheer in ay jiraan qaar shaqaalaha uu hanjaba oo banaanbaxyo ka baxsan sharciga sameya oo watay shahaadooyin wax barasho oo si sharci daro ah loogu soo sameeyay kuwaasina shaqada waan ka joojinay.
Waxa la sheegay in ha’ayada komeershaal noomiins ee sida gaarka ah loo leeyahay la asaasay xiligi xayle silaase oo ku hawlan in ay isu geeyaan shaqaalaha iyo shaqada, waxaana ay bixiyaan aadeegyo 13 gaadhaya.
Wargayska addis maleda ayaa isku dayay in uu wax ka waydiiyo xafiiska shaqaalaha iyo arimaha bulshada ee magalada addis ababa cabashooyinkaasi ka soo gaadhay ururada shaqaalaha balse uma suurto galin.
Total views : 6982841